Home Wararka Farmaajo muxuu ka filan karaa Hogaanka Cusub ee Madashada Xisbiyada Qaran
Farmaajo muxuu ka filan karaa Hogaanka Cusub ee Madashada Xisbiyada Qaran
Waxaa horaantii asbuucaan looga dhawaaqay magalaada Muqadisho Isbahaysi siyaasadeed oo ay ku midaysan yihiin lix xisbi. Madashaan ayaa loo doortay in uu Gudoomiye ka noqdo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmad, halka labo ku gudoomiye ku xigeen laga dhigay Madaxweynihii hore ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Shiikh Adan iyo Xildhibaan Prof. Maxamed Cabdi Gaandi.
Madashada ayaa la filayaa in ay tilaabooyin culculus qaado asbuucyada soo socda, dad ku dhaw hogaanka madasha ayaa MOL u sheegay in dalka laga diyaarin doono mudaaharaadyo iyo dhaq-dhaqaaq siyaasadeed oo looga soo horjeedo Madaxweyne Farmaajo iyo kooxa la shaqaysta.
Dhanka kale Isbahaysiga ayaa la filayaa in ay shirar kala duwan la qaataan qaar ka mida beesha caalamka si ay ugu sharxaan mabaa’diida isbahaysiga iyo qorshooyinka ay damacsan yihiin in ay ku dhaqaaqan asbuucyada soo socda.
Hogaanka dhawaan la magacaabay ayaa waxa ku midoobay madaxdii horayee soo hogamisay isbaysbiga lagu dhisay dalka Eriteereeya kaas oo ay hogaaminayay Shiikh Sharif iyo Sharif Xasan. Dad badan ayaa qabo in labada Sharif ee hogaanka ibahaysiga ugu sareeye ay culays ways saari doonaan dowlada Farmaajo ayaga oo waayo aragnimo u leh abaabulka shacabka iyo mucaaradka. Farmaajo ayaa aad uga walwalsan talaabooyinka ay qaadi doonaa isbahaysiga
Shacabka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay isbahaysiga Cusub kaas oo la filayo in wax ka badalo siyaasada dalka.